नेपाल प्रहरीको सुडान मिसन बन्द, मिसन बन्द भएपछि ८६ प्रहरी स्वेदश फर्किए – Sapana Sanjal
नेपाल प्रहरीको सुडान मिसन बन्द, मिसन बन्द भएपछि ८६ प्रहरी स्वेदश फर्किए
June 5, 2021 230
Sapana Sanjal : काठमाडौं । द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी देश सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीको फम्र्ड पुलिस युनिट ९एफपियू० मिसन बन्द भएको छ । राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्कै निर्णयअनुसार मिसन बन्द भएको हो । मिसन बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत ८६ प्रहरी स्वेदश फर्किएका छन् ।
अन्य ८३ जनालाई भने फरक जिम्मेवारीका लागि करिब ६ महिना राख्ने निर्णय भएको छ । एफपियूलाई पुलिस गार्ड युनिट ९पिजियू०का रूपमा आगामी डिसेम्बरसम्म राख्ने निर्णय भएको छ । पिजियूले युएन क्याम्प र बन्दोबस्तीका सरसामानको सुरक्षा गर्नेछ ।
सुरक्षा परिषद्ले गत ३१ डिसेम्बरदेखि नै सुडान मिसन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो वर्षभित्र राष्ट्रसंघअन्तर्गत शान्ति मिसनमा खटिएका सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुनेछन् । सुडानमा विभिन्न देशका १३ वटा एफपियू कार्यरत छन् । अन्य देशका सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता भएका छन् । पूर्ण रूपमा शान्ति स्थापना भइनसके पनि सुडान सरकारको दबाबमा सुरक्षा परिषद्ले मिसन अन्त्य गरेको हो ।
सुडान मिसन बन्द भएपछि केही सुरक्षाकर्मी फिर्ता आइसकेको र केही बाँकी रहेको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुँवरले बताए । सन् २००८ सेप्टेम्बरमा स्थापना भएको प्रहरीको सुडानस्थित एफपियू मिसन त्यही हो, जसको बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा करोडौँ भ्रष्टाचार हुँदा सिंगो प्रहरी नै बदनाम भएको थियो । जुन अनियमिततामा नेपाल प्रहरीका तीन पूर्वआइजिपीसहितका अधिकारीले जेल सजाय भोगेर छुटिसकेका छन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
Prevजेठ २६ गतेदेखि हप्ताको यो बार श्रम स्वीकृति दिने निर्णय
Nextयो झारलाई चिन्नु हुन्छ ? जसले दिन थाल्यो मासिक ५० हजार सम्मकाे कमाई, कसरी कमाउने सकिन्छ त !
दीपक मनाङेका भाइ कोर्तो यस्तो घटनामा पक्राउ
रगतको कमी हुन नदिन हाम्रै भान्सामा पाइने यी चिजहरु खाने बानिँ बसाल्नुहाेस् ! पढेर सेयर गर्नुहाेला
पार्टी फुटाउन ठिक्क परेका ओली र नेपाललाई कसले पठायो यस्तो एसएमएस ?
माइतीघरमा युथ फोर्सले गरेको फोहोर सफा गर्दै डा. केसी
पारस शाहले भने, ‘हेलमेट लगाउनु नलगाउनु मेरो मनको इच्छा हो’ (1370)
गाउँपालिकामा अनुदान खान यस्तो समेत हुँदोरहेछ ! किसान देबीप्रसादले दिउँसै पारे रात (1366)
चर्चित नायिका प्रियंका कार्की सुत्केरी हुने दिन नजिकिएका बेला के भयो फेरी आयुष्मानलाई? (1286)
२ दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, ॐ लेखि सेयर गरौं !!! (1064)
जतिसुकै बिजी भएपनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढिदिनु होला।। (960)
रामराम के भयो यी साना बाबुलाई ,हेर्दाहेर्दै यस्तो भयो ,कठै बिचरा (हेर्नुस् भिडियो ) (921)
खोकी र ज्वरोभन्दा पनि यी दुई लक्षण देखुनु को-रोनाको स्पष्ट लक्षण हो, कस्ताे छ त तपाईहरुकाे स्वास्थ ? (898)
गर्भवती भएको भन्दै बधाई खाएर हस्पिटल जाँदा जब उनको पेटमा डाक्टरले भेटायो यस्तो चिज जस्ले सबैलाई बनायो चकित (876)
बुवाको कम्मरको भाग पुरै कु`हिएको छ ,छोरिहरुले ओछ्यानमै दिशा पिसाब गराउछन् ,यतिसम्म गर्छन्,कठै बिचरा (हेर्नुस् भिडियो ) (840)
जतिसुकै बिजी भए पनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला : नपढे तपाईँ लाई पछुतो हुनेछ ! (778)
नेपालमै ग्यास र पेट्रोल खानी रहेकाे चिनियाँ अध्ययनकाे निष्कर्ष, अब नेपाल मै उत्पादन हुने
आफ्नै भाई ६७ बर्षीय शेर बहादुर तामाङलाई ……
पोखरामा फेरी देखियो यस्तो घातक पुतली, उपचारमा ढिलाई भए आँखाको ज्योति गुम्ने
ग्राण्डी अस्पतालको धन्दा : पैसा कमाउन यस्तो गर्दा रहेछन
आमाको दुःख पनि कम हुन्छ भनेपछि लोभिएँ
© Copyright 2016–2021 Sapana Sanjal. All rights reserved.